नयाँ बर्ष २०७८ को शुभकामना! यो सालमा राशि अनुसार तपाईंको भाग्य कस्तो हुन्छ? (विस्तृतमा हेर्नुस्) – Sanjal Nepal
Homeराशिफलनयाँ बर्ष २०७८ को शुभकामना! यो सालमा राशि अनुसार तपाईंको भाग्य कस्तो हुन्छ? (विस्तृतमा हेर्नुस्)
April 14, 2021 admin राशिफल 22178
यो वर्ष शनि साढेसाती धनुलाई अन्त्य, कुम्भलाई आद्य र मकरलाई मध्यसाढेसाती रहनेछ । तुला तथा मिथुन राशिलाई अढैया शनि रहनेछ । साढेसाती शनिको प्रभाव जन्मकुण्डलीमा शनि राम्रो भएमा राम्रो फल, नराम्रो भएमा नराम्रो फल मिल्नेछ । अढैया शनिले जन्मकुण्डलीमा शनि राम्रो भएमा बिगार नगर्ने राम्रो भने कसैलाई नगर्ने हुन्छ ।
साढेसाती वा अढैया लाग्दा सर्वप्रथम पीपलको पूजा गर्ने, भैरवको पूजा गर्ने र शनिबारको दिन भैरवको पूजा गरी भैरवको दायाँहातमा २ मिटर कालो कपडा राखी ‘शनिको दशा नाश होस्’ भनेर दश कदम पछि हटी नहेरी फर्कने । भैरवकमन्दिर उपलब्ध नभएमा २ नदीको संगममा नदीको मूलतिर वा नदी आएको तर्फ फर्केर पूजा गर्ने, २ मिटर कालो कपडा पछाडिबाट बगाउने, ‘मेरो शनि दोष बगोस्’ भनी बगेकोलाई नहेर्ने । यसले गर्दा शनिको दोष कम हुन्छ । यो व्यावहारिक प्रयोगले थाहा भएको हो ।
यस वर्ष ग्रहगोचर राम्रो छ । वर्षभरि नवौँको मालिक गुरु एकादश स्थान रहने हुँदा प्रशस्त आम्दानी हुने योग छ । दशौँमा स्वगृही बलशाली रहेका शनी एकादशेश भएको र शनि जगलग्नदेखि भएको हुँदा आर्थिक एवं बौध्दिक मार्ग उच्च रहनेछ । आँटेका कामहरू धेरै सफल हुनेछन् । नयाँ कामको आरम्भ हुनेछ । अरूको विश्वास जितेर वैदेशिक व्यापारमा सफलता र कूटनीतिक कार्यमा विशेष लाभ मिल्नेछ । भाग्य बलियो हुनाले धार्मिक र सामाजिक कार्यमा सफलता, सम्मान सोचेभन्दा बढी मिल्नेछ । नयाँ प्रेममा प्रवेश एवं प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने, प्रेमविहीन अविवाहितहरूलाई विवाह बन्धनमा जोडिने अवसर मिल्नेछ । विवाहितहरूका लागि पुत्रलाभको अवसर प्राप्त हुनेछ । स्वदेशी तथा विदेशी शिक्षामा छात्रवृत्तिसहितको उच्च शिक्षा प्राप्त हुने बलियो सम्भावना छ ।
वर्षभरी भाग्य भाव र कर्म भाव बलियो भएकोले कर्म प्राप्ति हुने योग छ । उतारचढाव प्रशस्त आएपनि अन्ततः परिणाम सकारात्मक रहनेछ । नयाँ नोकरी प्राप्त हुने, भएको नोकरीमा पदोन्नति हुने योग छ । राजनीतिमा गुमेको स्थान पुनः प्राप्त हुने समय छ । नयाँ घर, जग्गा र सवारीसाधन जोड्ने अवसर यो वर्ष मिल्नेछ । अन्न आर्जनका विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ । लेखन मार्गमा ऐतिहासिक सफलता मिल्नेछ । खेलाडीहरूका लागि वर्ष उत्कृष्ट नै भन्नुपर्दछ । सहयोगीहरू, दाजुभाइ, पिता तथा पैतृक सम्पत्तिमा सकात्मक अवस्था सिर्जना भएकोले समग्रमा यो वर्ष फलदायी रहनेछ । निर्धक्क विश्वासमा अघि बढेमा धेरै कठिनाइ आउने एवं विवेकपूर्ण तरिकाले अघि बढेमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गर्ने अवसर मिल्नेछ । श्रावणमा घरेलु झगडा हुनुको साथै सवारी साधान विग्रन सक्ने, घरजग्गा सम्बन्धी काममा अवरोध, मित्रहरूबाट धोका हुन सक्छ । मार्गमा स्वास्थमा बाधा आउने, काममा अवरोध आउने, लेनदेनमा विवाद,शरीरमा चोटपटक लाग्न सक्नेछ । चैत्रमा आर्थिक कठिनाई र झुटा आरोप आउने,मुद्दा मामला लाग्न सक्नेछ । आषाढमा शारीरिक अवस्था मजबुत हुनुको साथै धेरै ठूला कामहरू बन्ने एवं नयाँ कामको अवसर मिल्ने योग छ । आश्विनमा शत्रुनाश हुने, आफ्नो वर्चस्व बढ्ने, फागुनमा धेरै धन कमाउन सफलता मिल्नेछ। अन्य महिना मध्यम रहनेछन् । द्वितीय राहुले कुरा काट्नेहरू सक्रिय हुनेछन् । दाँत मुख्मा पीडा धेरै हुनेछ । बोल्दा विचार पुर्‍याउनुपर्ला।
समग्रमा यस वर्षको ग्रह गोचर मध्यम रहनेछ । एकल राजयोग भएको शनिको भाग्यभावमा हुँदा भाग्यलाई चम्काउनेछ । धार्मिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नुको साथै सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुँदा सफलता मिल्नेछ । कर्मेश र भाग्य शनिबाट बनेको एकल राजयोगको प्रभावले आफ्नो वर्चस्व सर्वत्र फैलाउन सकिनेछ । शनिको एकादश दृष्टिले धन मनग्य कमाउने अवसर मिल्नेछ । दशम बृहस्पतिको प्रभाव केन्द्रादि दोष रहँदा फलदायी नरहे पनि द्वितीय र चतुर्थमा दृष्टि भएकाले नयाँ गृहमा प्रवेश गर्ने, नयाँ सवारी लाभ हुने बलियो सम्भावना छ । सक्रिय राजनीतिमा सफताको सम्भावना छैन । कूटनीतिक सफलता आंशिक लाभ हुनेछ। पढाइमा सफलता मिल्नका लागि यस वर्ष निकै परिश्रम गर्नुपर्ने छ । आयेश, कर्मस्थानमा भाग्येश र कर्मेशको एकल राजयोग भने बलशाली रहनेछ । सहयोगी, दाजुभाइ तथा पिताका बीचका सम्बन्धमा केही ह्रास आएपनि धैर्य गरेमा सफताको मार्गमा बाधा आउने छैन । राशिको राहु र सप्तम केतुको प्रतिकूलताले विदेशयात्रामा कठिनाइ आउन सक्छ ।
व्यापारमा कठिनाइ आउनुको साथै प्रेममा संलग्न हुनेहरूको लागि पीडा हुने भएकाले विछोडको मार्ग अबलम्बन गर्न सक्छ । आर्थिक उन्नतिका हिसाबले यो वर्ष निकै राम्रो रहनेछ । स्मरण रहोस् आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ गतेसम्म गुरु, शनिको प्रभावको समयमा माथि उल्लिखित कार्य कुराहरू निर्विवाद अघि बढ्न सक्छ । त्यो ३९ दिनको समयमा अति शुभ रहेकोले उच्च आर्थिक उपलब्धीमा अग्र हुनुको साथै शरीरमा उमङ्ग र मनमा उत्साह बढ्ने देखिन्छ । केतुको प्रतिकूलताले पतिपत्नीबीचमा विवाद वढाउन सक्ने भएकोले संयम रहनुहोला । वैशाखमा खर्च र विवाद बढ्ने,मुद्दामामिला आउन सक्छ । आषाढमा धनमाल हराउन सक्ने, दाँत र मुखमा पीडा हुने योग छ । भाद्रमा घरेलु समस्याले सताउने, सवारी साधनले दुःख दिनेछ । पौषमा स्वास्थ प्रतिकूल, लेनदेनमा विवाद वढ्नेछ । श्रावणमा पराक्रम वढ्ने, अधुरा काम बन्ने, नयाँ कामको अवसर मिल्ने योग छ । कार्तिक र चैत्रमा शत्रुनास हुने, धन मनग्य कमाउने अवसर मिल्नेछ । घर तथा सवारी साधन जोड्न राम्रो तथा फलदायी रहनेछ । अन्य महिनाहरू मध्यम रहनेछन् ।
वर्षारम्भमा अढैया शनिको र बाह्रौ मंगलको प्रतिकूलताले स्वास्थमा बाधा आउने, काम बिग्रने योग भएपनि यस वर्ष गुरु अनुकूल हुने हुँदा भाग्यले पूर्णसाथ दिनेछ । धार्मिक कार्यमा सम्मानका साथै सामाजिक क्षेत्रमा प्रशंसा पाउने योग छ । बौध्दिक कार्यमा सबैलाई समेट्दै अघि बढ्ने अवसर मिल्नेछ । पढाइमा सफलता सोचे जस्तै मिल्नेछ । पुत्रलाभको अवसर प्राप्त होला । छात्रवृद्धि प्राप्त गरी परदेश पढ्न जान मिल्ने सम्भावना उत्तिकै छ । व्यापारमा लाभ हुनुको साथै वैदेशिक कार्यमा अपेक्षित सुधार आउनेछ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्धमा उल्लेखनीय सुधार आउनेछ । परिवारमा सकारात्मक सम्बन्ध बन्ने तथा नोकरीमा प्रगति, उन्नतिको साथै राजनीतिमा कूटनैतिक सहयोग प्राप्तभई ठूलै फड्को मार्ने अवसर मिल्नेछ । आर्थिक लाभ प्रशस्त मात्रामा गर्न सकिनेछ । महत्वपूर्ण कामहरू अघि बढाउन उचित हुनेछ । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ सम्म राजनीतिमा लाग्नेहरूका लागि कूटनैतिक असफलताले पदच्यूत गराउन सक्छन् । व्यापारमा र वैदेशिक कार्यमा अवरोध आउनेछ । भाग्य भावको शनि अष्टम अढैया शनिको प्रभावले आर्थिक संकट बढाउनेछ ।
धार्मिक र सामाजिक कार्यमा झुट्टा आरोपको सामना गर्नुपर्नेछ । उच्च रक्तस्रावको साथै मुटु, मस्तिष्कमा पीडा हुने तथा हाडजोर्नीको समस्या पनि आउनेछ । नगद कारोबार गरे विवाद बढेर मुद्दामामला लाग्न सक्छ । विश्वासमा धोका हुनेछ । परिवारले साथ नदिने मित्रहरू स्वार्थमा प्रेरित भई आफूलाई फसाउन सक्रिय हुनेछन् । पति, पत्नीबीचको विवादमा संयम नभए विछोडको स्थिति आउनेछ । पिता, पुत्रबीच सम्बन्ध बिग्रनाले घरझगडा निकै बढ्नेछ । नोकरीमा झुट्टा आरोप लागेर अप्ठ्यारो पर्नसक्ने, स्थनान्तरण हुने र छुट्ने योग छ। अन्य समयमा संयम भएमा राम्रो रहनेछ । वैशाखमा धन लाभ हुनुको साथै नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । भाद्रमा पराक्रम बढ्ने, रोकिएका कामहरू अघि बढ्नेछ । मार्ग महिनाशत्रु पराजय हुनेछ । ज्येष्ठमा धननाश, शत्रुबाधा, झुट्टा अरोपलाग्न सक्नेछ । आश्विनमा घरेलु समस्याले सताउने, मित्रले धोका दिने, सवारी साधन विग्रनेछ । माघमा स्वास्थ्यमा बाधा, अर्थिकसंकट तथा लेनदेनमा विवाद आउने योगछ । अन्य महिनाहरू मध्यम छन् ।
भाग्येश वर्षारम्भमा अष्टम भावमा रहेका गुरुले स्वास्थ्यमा बाधा, शत्रु वृद्धि, काममा अवरोध आउन सक्छ । पढाइमा विघ्न आउने, सन्तानसँग विमति, लेखनमार्गमा बाधा आउन सक्ने सम्भावना छ। राहुको प्रतिकूल प्रभाव वर्षभरी रहने हुँदा नोकरीमा संकट आउने, राजनीतिमा पाएको सुखसुविधा गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। आर्थिक संकट बढाउनेछ । धार्मिक र सामाजिक कार्यमा झुट्टा आरोपको सामना गर्नुपर्नेछ । उच्च रक्तस्रावसहित मुटु, मस्तिकमा पीडा, हाडजोर्नीको समस्या आउनेछ । नगद कारोबार गरे विवाद बढेर मुद्दामामला लाग्न सक्छ । विश्वासमा धोका हुनेछ । परिवारले साथ नदिने मित्रहरू पनि स्वार्थमा प्रेरित भई आफूलाई फसाउन सक्रिय हुनेछन् । पति, पत्नीबीचको विवादमा संयम नभए विछोडको स्थिति आउनेछ । पिता, पुत्रबीच सम्बन्ध बिग्रनाले घरझगडा निकै बढ्नेछ । नोकरीमा झुट्टाआरोप लागेर अप्ठ्यारो पर्नसक्ने, स्थनान्तरण हुने र छुट्ने योग छ । आम्दानीको मार्ग सबै बन्द हुनेछन् । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ सम्म शनिको बृहस्पति सप्तम निचभङ्ग राजयोग हुने हुँदा आम्दानीका अवसरहरू प्रशस्त मात्रामा मिल्नेछन् ।
मनमा उत्साह र शरीरमा स्फुर्ति बढ्ने, रोकिएका कामहरू सुचारु हुने, नयाँ कामको अवसर मिल्नेछ । ज्ञान, विज्ञानमा लागेकाहरूका लागि समय अनुकूल रहनेछ । आफन्त, मित्र तथा परिवारहरूबाट उचित सहयोग मिल्नेछ । व्यापारमा राम्रो लाभ उठाउन सकिनेछ । वैदेशिक र कूटनीतिक कार्यमा संलग्न हुनेहरूका लागि शुभ हो । भाग्यले साथ दिनेछ । सामाजिक कार्यमा सम्मान पाउने योग छ । नोकरीमा प्रगति र उन्नतिको अवसर मिल्नेछ । राजनीतिमा गुमेका स्थान पुनः प्राप्तिको अवसर मिल्नेछ । सहयोगीहरूको सहयोग पूर्णरूपमा पाइनेछ । दाजुभाइ, दिदीबहिनीको सहयोगले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यलाई समेत अनुकूल प्रभाव पार्नेछ । आषाढ, कार्तिक, माघ अनुकूल र श्रावण, मार्ग,चैत्र प्रतिकूल रहनेछन् । अन्य महिना मध्यम रहनेछन्
यस वर्ष ग्रहले पूर्ण साथ दिनेछ । आँटेका काममा सफलता सजिलै मिल्नेछ । बौद्धिक कार्य र पढाईमा सफलता मिल्नेछ । लेखन कार्यमा तीब्रता आउनेछ । साहित्य, कला, गीत, सङ्गीतमा हुनेहरूका लागि अति उत्तम रहनेछ । शैक्षिक उन्नति राम्रो छ । छात्रवृत्ति प्राप्त हुने योग छ । व्यावसायिक यात्रामा संलग्न हुने सम्भावना छ । विदेशिएर भुलेका मित्रहरूले पुनः सम्झना गर्नेछन् । आयात निर्यातमा लाग्नेहरूका लागि अनुकूल रहनेछ । कूटनीतिक कार्यमा लग्नेहरूका लागि अति उत्तम रहनेछ । आम्दानीको अवसरहरू प्रसस्त मिल्नेछ । मित्रता प्रेममा बदलिने, प्रेम वैवाहिक यात्रातिर लम्कने समय छ । पतिपत्नीबीच सुमधुर सम्बन्ध निर्माण हुनेछ ।
नोकरीमा पदोन्नतिको साथै लाभप्रद स्थानमा स्थानान्तरण हुने बलियो सम्भावना छ । राजनीतिमा ऐतिहासिक सफलता पाउने योग छ । जोश र जाँगर बढ्ने, नयाँ कामको अवसर मिल्नेछ । रोकिएको कामहरू सुचारु हुनेछन् । सन्तान प्राप्तिको बलियो सम्भावना छ । भाग्य बलियो भएकाले सामाजिक क्षेत्रमा सम्मान मिल्नुको साथै धार्मिक कार्यको रुचिको साथै तीर्थयात्राको पनि सम्भावना छ । आश्विन १४ गतेदेखि कार्तिक २३ गतेसम्म बृहस्पति प्रतिकूल हुने हुँदा स्वास्थ्यमा बाधा आउने, शत्रु बढ्ने, काममा अवरोध आउने, सामाजिक कार्यमा बदनाम हुन सक्नेछ । व्यापारमा उतारचढाव आउने, यात्रामा संकट आउने, मित्र तथा परिवारसँग केही विमति रहने भएकोले संयम हुनु राम्रो। आषाढ, कार्तिक, माघमा काममा सफलता, शत्रु नास र धनलाभ हुने योग छ । श्रावण, आश्विन, मार्ग, चैत्रमा काम र स्वास्थ्यमा बाधा, धन नाश, शत्रु बढ्ने, चिन्ता बढ्नेछ । अन्य महिना मध्यम रहनेछन् ।
वर्षारम्भमा चतुर्थेश र सप्तमेश गुरु षष्ट स्थानमा प्रतिकूल भई बसेकाले घरेलु समस्या निकै बढ्नेछ । मित्र तथा परिवारहरूको असहयोगले दैनिकीमा अप्ठ्याराहरू प्रसस्तै आउनेछन् । बाहनले पटकपटक धोका दिनेछ । शत्रुसँग मिलेर परिवार र मित्रले फसाउने प्रयत्न गर्नेछन् । स्वास्थमा अनेक पीडा र विशेषतः पेटमा समस्या आउनेछ । विनाकारणको विवादले सामाजिक कार्यमा भएको प्रतिष्ठा धुमलिने सम्भावना छ । कामको बीचमा अवरोध आउने, सहयोगीहरूबाट धोका हुने, दाजुभाइहरूले सहयोग नगर्ने हुँदा सानो कामलाई पनि धेरै प्रयत्न गर्नुपर्नेछ । परिवारिक समस्या र मित्रहरूको सहयोगमा व्यस्त हुँदा पढाईमा बाधा आउने, बौद्धिक कार्यमा बाधा आउनाले मन भरङ्ग हुनेछ । सन्तानसँग विमति, लेखनमार्गमा बाधा आउनेछ, शत्रु सक्रिय हुनेछन् । प्रेममा खटपट आउने, पतिपत्नीबीच बढ्ने विमतिले निकै दुःखी बनाउनेछ।
व्यापार र वैदेशिक कार्यमा अवरोध आउने योग छ । आश्विन १४ गतेदेखि कार्तिक २३ गतेसम्म शनि र बृहस्पति दुवै अनुकूल भएकोले मनमा उत्साह एवं शरीरमा स्फूर्ति बढ्नेछ । रोकिएका कामहरू बन्नेछन् । नयाँ र आयमूलक कामहरू हात पर्नेछन् । सहयोगी र दाजुभाइहरूको सोचमा परिवर्तन आउनेछ । पढाइमा अपेक्षित सुधार आउनेछ । नोकरीमा आएको अवरोध हटेर जानेछ। राजनीतिमा सफलता मिल्नेछ । महत्वपूर्ण काम यही समयमा गर्नुहोला । आषाढ,श्रावण, मार्ग, फाल्गुनमा जोश र जाँगर बढ्ने, रोकिएका कामहरू बन्ने, नयाँ कामको अवसर पाउने, मानसम्मान पाउने, धन लाभ हुने योग छन् । वैशाख, भाद्र, पौषमा खर्च बढ्ने, विबाद बढ्ने, पारिवारिक समस्याले सताउने, स्वास्थमा बाधा आउने र अन्य महिना मध्यम रहनेछन् । भगवान् विष्णुको आराधना गर्नु वेश हुनेछ ।
समग्रमा तुला राशिलाई यो वर्ष मध्यम रहनेछ । अढैया शनि र अष्टम राहुको प्रभावले घरेलुसमस्या आइरहेनछ । परिवारको असहयोग र मित्रहरूको धोकाले मन अशान्त रहनेछ । लेनदेनमा विवाद बढ्नेछ । सवारीसाधानले धोका दिनेछ । मिर्गौला रोगले सताउन सक्छ । हाडजोर्नी र नसाको समस्या आउन सक्नेछ । आश्नि १४देखि कार्तिक २३ गतेसम्म समय निकै प्रतिकूल रहने हुँदा धेरै अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भएपनि वर्षारम्भदेखि वर्षभरी पञ्चम बृहस्पतिको प्रवेशले अति महत्वपूर्ण हुनेछ । ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुनेछ । नयाँ घर, नयाँ सवारी जोड्ने अवसर पनि मिल्नेछ । समाजमा तपाई र तपाईका शब्दले अरूको मन सजिलै जित्न सकिनेछ । भाग्यभाव, आयभाव राशिमा गुरुको दृष्टि रहने हुँदा न्यायक्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि यो वर्ष निकै अनुकूल रहनेछ । विद्यार्थीहरूले अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गरी स्वदेश तथा विदेशमा प्रस्थान गर्ने अवसर मिल्नेछ । व्यापारमा राम्रो उन्नति भई धन आर्जनका अवसर प्राप्त हुनेछन् । नयाँ प्रेम हुने, पुरानो प्रेमले वैवाहिक मार्ग प्राप्त गर्ने योग छ ।
पति, पत्नीबीच हुने सुमधुर सम्बन्धले घरेलु र अन्य कार्यलाई समेत सहज बनाउनेछ । कूटनीतिक कार्यमा चमत्कारिक सफलता पाउन सकिनेछ । ज्ञान, विज्ञानका क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि यो वर्ष फलदायी रहनेछ । सामाजिक कार्यमा उल्लेख्य सम्मान पाउने योग छ । नोकारीमा दक्षता देखाउँदै आफूलाई अग्रस्थानमा उभ्याउने अवसर मिल्नुको साथै पदोन्नति, स्थानान्तरण उचित समय उचित स्थानमा हुनेछ । राजनीतिमा गुमेको स्थान पुनः प्राप्त हुनेछ । आश्विन १४ देखि कात्तिक २३ गतेसम्म पुनः अढैया शनि प्रारम्भ हुँदा घरेलु समस्या बढ्ने, स्वास्थ्य गडबढ हुने, मित्र तथ परिवारले साथ नदिने आर्थिक संकट बढ्ने हुँदा त्यो समय महत्वपूर्ण काम नगर्नु उचित हुनेछ। श्रावण, भाद्र, पौष, चैत्रमा मानसम्मान र नोकारीमा मिल्ने, धन मनग्य कमाउने अवसर मिल्नेछ । शत्रु पराजय हुने छन् । शरीरमा जोश र जाँगर बढ्ने, अरूबाट सम्मान पाउने योग छ । ज्येष्ठ, आश्विन, माघमा स्वास्थ्यमा बाधा आउने, घरेलु समस्या बढ्ने, मित्र तथा परिवारले धोका दिने, सवारी साधन बिग्रने, आर्थिक संकट आउनेछ । अन्य महिना मध्यम रहनेछन् ।
वर्षारम्भमा ग्रह गोचर राम्रो रहनेछ । सानातिना समस्या आए पनि समग्रमा सफलता धेरै पाउने वर्ष छ । पराक्रम बढ्नुका साथै अधुरा काम बन्ने, नयाँ काम पाउने योग बलियो छ । सहयोगीहरूका सहयोग पर्याप्त मात्रामा मिल्नेछ । दजुभाइबाट पूर्ण सहयोग मिल्नेछ । बोलीको प्रभाव राम्रो हुनुको साथै अरूको विश्वास सजिलै जित्ने अवसर मिल्नेछ । कूटनीतिक कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता पाइनेछ । पढ्नका लागि विदेश वा स्वदेशमा छात्रवृत्ति प्राप्त हुने योग छ । घर, जग्गा तथा सवारी साधन जोड्ने अवसर मिल्नेछ । सन्तान नहुनेका लागि सन्तान प्राप्ति हुने बलियो सम्भावना छ, भएका सन्तानहरूको तीव्र प्रगति हुने योग छ । व्यापारमा र वैदेशिक कार्यमा उचित लाभ उठाउन सकिनेछ । प्रेम गर्ने अवसर मिल्नेछ । वैवाहिक सम्वन्धमा वाँधिने योग बलियो छ । भाग्य बलियो भएकाले सामाजिक कार्यमा उचित सम्मान पाउने योग छ ।
नोकरीमा उच्चस्थान प्राप्तिका साथै स्वीकार्य स्थानमा स्थानान्तरण हुनेछ । औद्योगिक कार्यमा संलग्नहरूका लागि वर्ष फलदायी रहनेछ । कृषि तथा निर्माण व्यावसायिक व्यक्तिहरूका लागि ग्रहगोचर राम्रो रहनेछ । बृहस्पति प्रतिकूल रहने हुँदा समय अलि प्रतिकूल हुन्छ। अनावश्यक विवादमा फस्न सक्ने, शत्रु बढ्ने, स्वास्थ्यमा अवरोध आउने योग छ। घरेलु समस्याले सताउनेछ। नोकरी तथा राजनीतिमा उतारचढाव आउने सम्भावना रहे पनि विश्वास गरेकाले धोका दिने हुने भएकाले विचार गर्नु उचित हुनेछ। यी समस्याबाट छुट्कारा पाउन विष्णुको आराधना गर्नु उचित हुनेछ। आषाढ, कात्तिक, फाल्गुण महिनामा स्वास्थमा संकट आउने, लेनदेनमा विवाद र खर्च बढ्ने, झुट्टा आरोप लाग्ने, मन विचलित हुने योग । वैशाख, भाद्र, आश्विन, माघमा नोकरी, सम्मान, राजनीतिमा सुधार आई जोश र जाँगर बढ्ने, शत्रु नाश हुने, धन लाभ हुने योग । अन्य महिना मध्यम रहनेछन् ।
यस वर्ष ग्रहगोचर समग्रमा राम्रो रहनेछ । गुरुको अनुकूलताले बोलीको पराक्रम बढ्ने, अरूको विश्वास जितेर महत्वपूर्ण कामहरू प्राप्त गरी सफल बनाउन सकिनेछ । मानसम्मान पाउने योग छ । मित्र तथा परिवारले कुरा बुझेर सहयोग गर्नेछन् । घर तथा सवारी साधन जोड्ने अवसर मिल्नेछ । नयाँ मित्रको आगमन हुने, परिवारको सदस्य संख्या वृद्धि हुने सम्भावना छ । सन्तानबाट सहयोग र सद्भाव मिल्नेछ । नोकारीमा पदोन्नति र राजनीतिमा प्रगति हुने बलियो सम्भावना छ । राहु तथा वर्षारम्भमा राहु, मंगलसमेत अनुकूल हुनाले सानो प्रयासले ठूलो काममा सफलता पाउन गाह्रो छैन । धन भण्डारणमा शनिको वास रहेकोले धन सञ्चित हुन गाह्रो छ । शत्रु वृद्धि हुनुको साथै स्वास्थ्यमा बाधा आउनेछ । आर्थिक कारोवारमा विवाद बढ्नुको साथै लेनदेनमा समेत धेरै विवाद बढ्नेछ । सहयोगीहरूबाट सहयोगभन्दा बढी अवरोध हुने, दाजुभाइबीच द्वन्द्व हुने, पारिवारिक कलह बढ्ने सम्भावना रहन्छ । अकस्मात् प्रेम हुनाले खुशी बढ्ने, मन शान्त हुनेछ । पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध निकै राम्रो हुनेछ। व्यापारमा धेरै अपेक्षित सुधार आउनेछ ।
वैदेशिक कार्यमा महत्वपूर्ण सफलता हात पर्नेछ । शनिको प्रतिकूलताले दाँतमा पीडा र उच्च रक्तचाव बढ्नाले मुटुमस्तिष्कमा समस्या हुन सक्छ । विपरीत लिङ्गीबाट झुट्टा आरोप लगाउने प्रयत्न हुन सक्ने हुँदा सचेत रहनु राम्रो । महत्वपूर्ण काम र निर्णय गर्दा सचेत रहनु उचित होला । ज्येष्ठ, आश्विन, कार्तिक र फाल्गुण पराक्रम बढ्ने, रोकिएको काम बन्ने, नयाँ काम पाउने, नोकरीमा सफलता मिल्ने योग । धन मनग्य कमाउने अवसर मिल्नेछ । श्रावण, मार्ग तथा चैत्र झुट्टा आरोप लाग्ने, स्वास्थ्यमा अवरोध आउने, लेनदेनमा विवाद आउने, परिवारको असहयोग र मित्रको धोकाले मन अशान्त हुनेछ । अन्य महिना मध्यम रहनेछन् ।
साढेसातीको प्रभाव वर्षभरी नै रहनेछ । गुरुको अनुकूल प्रभाव वर्षभरी रहने हुँदा बोलीको प्रभाव राम्रो रहने अरूको विश्वास लिन सकिने योग छ । धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्नेछ । सामाजिक कार्यमा सम्मान पाउनुहोला । पञ्चम राहु रहे पनि राहुको एकादश दृष्टि रहने, कर्मस्थानमा गुरुको दृष्टि रहने हुनाले आम्दानीका अवसरहरू प्रसस्तै मिल्ने छन्। सन्तानसँगको सम्बन्ध र पढाईको क्षेत्र यो वर्ष प्रतिकूल रहनेछ । शान्त मन र मिजासका कारण आफन्तहरूबाट धेरै लाभ मिल्नेछ । शत्रुबाट भने आक्रमित हुनु पर्नेछ । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ सम्म समय निकै प्रतिकूल रहने हुँदा धार्मिक पक्षमा मन नजाने, झुट्टा मुद्दामामलामा फस्ने सम्भावना छ । उच्च रक्तचाव बढ्नुको साथै मुटुमस्तिष्कमा पीडा हुन सक्छ । धनमाल हराउनुको साथै दाँत र मुखमा पीडा धेरै हुनेछ । पेट दुखाइ, हड्डी र नसाको समस्या वर्षभरी रहनेछ ।
नोकरीमा सचेत नभएमा यसै समय स्थानान्तरणका साथै पदमुक्तसम्म हुने अवस्था आउन सक्छ । राजनीतिमा प्रशस्तै अप्ठ्याराहरूको सामना गर्नुपर्नेछ । सानो भूलको परिणाम भयावह बन्नसक्छ । निर्दोष भए पनि दोषी बनेर आफ्नो स्थान गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकोले कसैको विश्वास गर्नु सङ्कट निम्त्याउनु हो भन्न सकिन्छ । अन्य समय कठिनताको बावजुत गुरुको अनुकूलताले संयम हुँदा महत्वपूर्ण काममा सफलता प्राप्त होला । संयम भएमा पढाइमा उन्नति, सन्तानको प्रगति र व्यापारमा लाभ उठाउन सकिनेछ । वैदेशिक र कूटनीतिक कार्यमा राम्रै सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । नयाँ र भरपर्दो प्रेमको प्रस्ताव आउने र भएको प्रेम वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने बलियो सम्भावना छ । धार्मिक र सामाजिक कार्यमा संयम भएर अघि बढेमा लाभ उठाउन सकिनेछ । आम्दानीका अवसरहरू प्रसस्तै मिल्नेछ । दिदीबहिनी र छोरीबुहारीको राम्रो सहयोग पाउनुहोला । बैशाखमा घरेलु समस्याले सताउनुको साथै सवारी साधानले दुःख दिने, मित्रले धोका दिने योग छ । भाद्रमा स्वास्थ्य र काममा बाधा, आर्थिक संकट, पौष महिना अशुभ रहनेछन् । आषाढमा शत्रु नाश हुने, काममा सफलता मिल्नेछ । मार्गमा धनलाभ, विद्यामा सफलता, सन्तान सुख मिल्नेछ । चैतमा पराक्रम बढ्ने, अधुरा काम पुरा हुने, नयाँ कामको अवसर पाउने योग छ । अन्य महिना मध्यम रहनेछन् ।
ग्रहगोचर वर्षको धेरै समय प्रतिकूल रहनेछ । वर्षारम्भमा आद्य साढेसाती, द्वितीय र एकादशेश गुरु राशिमा केन्द्रादि दोष लिएर बस्ने हुनाले मानसिक तनाव प्रसस्त मात्रामा बढ्नेछ । चतुर्थ राहुले घरेलु समस्या बढाउने, मित्रहरूले धोका दिने, सवारी साधनमा समस्या आउने योग छ । बाह्रौँ शनिले सञ्चित धनको नाश हुनेछ। अनावश्यक विवादले मानसिक सन्तुलन कायम राख्न गाह्रो पर्न सक्छ । अरूबाट तीव्र आलोचना हुने, धनमाल हराउने सम्भावना छ । उपलब्धिहीन कार्यमा समय खर्च हुनेछ । दाजुभाइ र सहयोगीहरूको सहयोग प्राप्त भए पनि आफ्नै गलत विचारका कारण लाभ उठाउन सकिने छैन । दाँत र मुखमा पीडा हुने, उच्च रक्तचापले गर्दा मुटुमस्तिष्कमा पीडा बढ्न सक्छ । हड्डी र नसामा समस्या आउने सक्ने योग पनि छ । सन्तानसँग विमति नरहने, पढाइमा सफलता मिल्ने योग छ । आश्विन १४ देखि कार्तिक २३ गतेसम्मको समय अनुकूल रहने हुँदा धन प्रशस्त कमाउन सकिनेछ । बोलीको प्रभावले अरूलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने अवसर मिल्नेछ । उच्च मनोबल र नयाँ जोशका साथ अघि बढ्दा पुराना समस्या सुल्झाउन, नयाँ कामहरू सुरु गर्न सहज हुनेछ ।
परिवार र मित्रबाट उचित सहयोग मिल्नेछ । घरघडेरी तथा सवारी साधन जोड्ने अवसर मिल्नुको साथै नोकरीमा उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण र पदोन्नति हुने योग छ। राजनीतिमा गुमेको स्थान पुनः प्राप्त हुनेछ । विज्ञानमा अनुसन्धान गर्न लागि परेकाहरूले चमत्कारिक सफलता हासिल गर्नेछन् । व्यापारमा र वैदेशिक कार्यमा राम्रो सफलता मिल्नेछ। कूटनीतिक कार्यमा सफलता र राजनैतिक नियुक्तिको योग बलियो छ । महत्वपूर्ण काम यही समयमा गर्नु होला । बैशाख , श्रावण र पौष महिनामा पराक्रम बढ्ने नयाँकामको अवसर मिल्ने, धन मनग्य कमाउने सहयोगीहरूको राम्रो सहयोग रहनेछ । ज्येष्ठ, आश्विन र माघमा घरेलु समस्याले सताउने स्वास्थ्यमा बाधा आउने,धन नाश र झुट्टा आरोप लाग्ने भएकोले अशुभ रहनेछन् । अन्य महिना मध्यम रहनेछन ।
समग्रमा ग्रहगोचर अनुकूल रहे पनि तृतीय राहुको अनुकूल प्रभावले पराक्रम वृद्धि हुने, अधुरा काम बन्ने, नयाँकामको अवसर मिल्ने योग छ । बाह्रौँ बृहस्पतिको प्रतिकूलताले खर्च विवाद बढ्ने, तीब्र तनावको सामना गर्नुपर्ला । वर्षारम्भमा एकादश भावमा रहेको शनि अनुकूलताले प्रशस्त आय आर्जन गर्न सकिनेछ । तपाईको सत्यतालाई सबैले स्वीकार्ने र साथ दिँदै सफल हुन सहयोग गर्ने योग छ । शरीर स्फूर्तिलो हुनाले महत्वपूर्ण कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन सकिनेछ । नयाँ मित्रहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्ने अवसर मिल्नेछन् । सहयोगीहरू, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूबाट राम्रो सहयोग नपाइने हुँदा काम गर्दा आफैँले प्रयत्न गर्नुपर्ला । न्यायिक, वैज्ञानिक र साहित्यिक क्षेत्रमा अवरोध आउने भएकोले सचेत रहनुपर्ने छ । सन्तानबाट सहयोग पाउने सम्भावना अत्यन्त कम रहनेछ । वैदेशिक व्यापार, वैदेशिक शैक्षिक,छात्रवृत्ति र कूटनैतिक कार्यमा रहेकाहरूलाई यो वर्ष ग्रहले पूर्ण साथ नदिने भएकोले संयम र सजग भएर काम गर्नु उचितहोला । नयाँप्रेमको प्रस्तावले पुराना प्रेमलाई गतिरोध तथा विनाप्रेमहरूको पनि वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने योगमा पनि संकट आउन सक्छ । धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा सफलताको साथै सम्मान पाउने योग छ । नोकरीमा संकट आउनाले स्थानान्तरण र झुट्टा आरोप लाग्न सक्ने बलियो सम्भावना छ ।
आश्विन १४ गतेदेखि कार्तिक २३ सम्म विग्रेका कामहरू भन्ने मानसम्मान मिल्ने, आर्थिक उन्नतिले नयाँगति लिने, राजनीतिमा ऐतिहासिक सफलता मिल्नेछ । बौद्धिक कार्यमा तीब्रता आउने, पढाईमा सुधार आउनेछ । शैक्षिक, न्यायिक, दार्शनिक कार्यमा राम्रो सफलता हासिल गर्न सकिनेछ । गुरु, शनिकोसंयोगले आमावुवाको सन्तानसँग, सन्तानको आमाबुवासँग अति राम्रो सम्बन्ध हुन सक्ने भएकोले त्यसप्रति सक्रिय रहनु होला । महत्वपूर्ण निर्णयहरू सकेसम्म यो समयमा गर्नु उचित हुनेछ । ज्येष्ठ, भाद्र र माघमा पराक्रम बढ्ने, अधुरा काम बन्ने,नयाँकामको अवसर मिल्ने र धन मनग्य आर्जन हुने योग छ । अषाढ, कार्तिक र फाल्गुणमा खर्च र विवाद बढ्ने, स्वास्थ्यमा बाधा आउने, पारिवारिक समस्या वढ्ने, सवारी साधन बिग्रने वलियो सम्भावना रहनेछ । अन्य महिनाहरू मध्यम रहनेछन् ।
शारीरिक सम्भोग किन आवश्यक छ ? संसारमा सर्वप्रथम कुन जीवले सम्भोग गर्‍यो ?
January 28, 2021 admin राशिफल 1436
हिन्दुधर्म अनुसार लक्ष्मीलाई धनकी देवी भनेर पुज्ने गरिन्छ । लक्ष्मीलाई सुन्दरताको साथै सफल सौभाग्य,समृद्धि र सम्पन्नताको रुपमा पनि मानिन्छ।लक्ष्मीलाई खुसी पार्न सके धनी भइन्छ भन्ने हिन्दुधर्मावलम्बीहरुको विश्वास रहेको छ । त्यसैले आज हामी तपाईहरुलाई लक्ष्मी
November 21, 2020 admin राशिफल 2381
मेष=> पैत्रिक सम्पत्तिमा विवाद आउनुका साथै दाजुभाइमा भागबन्डाको समय छ । व्यवसाय र कृषितर्फ लगनशीलताले ठूलो काम बन्न सक्छ । सहकर्मीहरूसँग प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । बिनाकारण आफन्तजनबाट टाढिनुपर्नेछ । मातापिताका बारेमा चिन्ता बढ्नेछ । विश्वास पात्रले
आजको राशिफल || वि.सं. २०७७ पौष २९ बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस
January 13, 2021 admin राशिफल 1404
आगामी ३ दिनभित्र पर्ने चाडपर्व, उत्सव र मुहूर्तादिको विवरण :– २९ गते : स्नानदानादिका लागि अमावस्या (औंसी), पौषे औंसी, बेत्रावती, बराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, गोकर्णादि तीर्थमा तीर्थश्राद्ध, भारतमा गया श्राद्ध, हलो बार्ने दिन, ०१ गते : माघे